Motorola ga -eji gam akporo One wepụta ekwentị anọ n'afọ a | Androidsis
Motorola bụ otu n'ime ụdị dị iche iche na gam akporo na nwere ama na gam akporo Otu dika sistemụ arụmọrụ. Na nke gị ọ bụ Moto Otu, webatara afọ gara aga wee bido ụwa niile, nakwa na Spain. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ugbu a na ọgbọ ọhụụ nke ekwentị nke ga-eji ụdị a nke sistemụ arụmọrụ.
N’izu ndị a, anyị ahụla otú ha na-eri mmiri na nkọwa mbu banyere Motorola One Vision, nke bụ ekwentị izizi emere ọhụụ n’ọgbọ ọhụụ a nwere gam akporo Otu.
Gam akporo Otu bu nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ na na-enweta ewu ewu na ahịa, karịsịa kemgbe afọ 2017 o yiri ka ihe ọ na-aga nke ọma. N'afọ gara aga ụfọdụ ụdị mere ntinye ya na nke a, Motorola bụ otu n'ime ha. Mmetụta dị mma na ụlọ ọrụ ahụ, ọ dịkarịa ala o yiri ka, n'ihi na ugbu a, ha na-arụ ọrụ karịa ekwentị.
N'oge ahụ, asịrị niile anyị nụrụ na-ezo aka na Motorola One Vision. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ Ọ ga - ahapụ anyị ka anyị nwekwuo ekwentị n'ime oke a, dị ka ọtụtụ ndị na-enye ihe ọmụma kwuru. Otu n'ime ha, nke dị oke mkpa, bụ Evan Blass. Onye mgbapụta a ma ama na-enyekarị ọtụtụ ozi na nke a. Yabụ, ikwupụta na enwere ọtụtụ ekwentị na mmepe n'ime usoro a bụ ihe iburu n'uche.
Iji kwuo okwu, anyị nwere ike ịtụ anya smartphones anọ n'otu. Ya mere ika a ga - agbaso usoro yiri nke ahụ ha mere na Moto G7 nso, nke afọ a gosipụtara ekwentị anọ maka oge mbụ. N'echiche a, aha nke ụdị ọhụrụ a ga - abụ:
Na nke atọ anyị na-enwe data izu ndị a, dị ka eziokwu ahụ ga-eji ihe nhazi Exynos. Bụ ụzọ otu n'ime smartphones mbụ na ahịa iji Samsung processor, ndị ọzọ karịa ika ahụ n'onwe ya. Obi abụọ adịghị ya, ọ bụ nzọ mmasị na akụkụ nke ụlọ ọrụ. Mana nke ahụ nwere ike inwe ezigbo arụmọrụ. Na mgbakwunye, ọ na-eme ka o doo anyị anya na ọ bụ ụdị dị n'etiti, ebe ọ bụ na ihe nhazi ahụ ọ ga-eji bụ Exynos 9610, nke bụ otu nhazi ahụ anyị nwere na Galaxy A50, otu n'ime ọkọlọtọ nke etiti Samsung. -eji agba.
Na ike nke ekwentị n'ime a nso nke Motorola anyị na-adịghị ma nwere data. Enweghi ihi mmiri na ha ruo ugbu a, yabụ n'echiche a, anyị ga-echere nkwụsị ọhụrụ. Companylọ ọrụ ahụ n'onwe ya ekwughi ihe ọ bụla gbasara atụmatụ ya na nke a. Anyị amaghị mgbe ekwentị ndị a ga-ahapụ. O nweghikwa ndị leakerụ nyeburu ozi gbasara nkọwa a. Ya mere, anyị ga-echere maka data ọhụrụ.
Mana o doro anya na Motorola na-awụli elu na gam akporo Otu bandwagon, na ngụkọta nke smartphones ọhụrụ anọ. N'ụzọ dị otú a, etiti ya ga-ezu oke, na-egosi onwe ya dịka otu n'ime nhọrọ kachasị mma na nke a na gam akporo taa. Karịsịa ebe ọ bụ na gam akporo Otu bụ nsụgharị nke ndị na-azụ ahịa nwere mmasị, nyere enweghị enweghị bloatware na ekwentị, nke na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ ka mma n'oge niile. Ọ bụ ya mere anyị ji hụ ka ahịa ha si abawanye.
Ọ bụ ezie na asọmpi na nke a bụkwa ihe ama. Nokia na-ejikwa gam akporo One na ekwentị ya niile, anyị enweghị ike ichefu Xiaomi ma, nke nwere ọgbọ abụọ na nke atọ n'ụzọ ugbu a. Ya mere, ọ ga-adị mkpa ịhụ ma ọ bụrụ na Motorola na-achịkwa ịbanye n'ahịa a, nke na-ekwe nkwa ịhapụ anyị ekwentị nke nnukwu mmasị na ọnwa ndị a na-abịanụ. Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ ụlọ ọrụ ahụ?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola ẹkedori ọtụtụ igwe na Android One anya